Fivoaran'ny toe-pahasalamana :: Mitombo ny soritr’aretin’ireo olona 11 voan’ny « coronavirus » • AoRaha
Tafakatra iraika ambin’ny folo amin’ireo olona telo amby efapolo mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 no nahitana ny soritr’aretina coronavirus, hatramin’ny omaly antoandro. Ny dimy amin’ireo no tsy atahorana loatra, ankoatra ny fanaviana, mangorangorana, mikohamaina, fanaintainan’ny vatana. Ny enina kosa no sempotra ka mila arahi-maso akaiky ny fahasalamany. Nilàna ôksizena ny iray tamin’izy ireo, ary mbola ao anatin’ny fitsaboana tanteraka.
Ny roa amby telopolo indray dia tsy ahitana ny soritr’aretina mihitsy. Nijanona ho telo amby efapolo ireo olona voan’ny « coronavirus » voatily teny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar, araka ny vaovao nampitain’ny teny amin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny ady amin’ny « Covid-19 », omaly tamin’ny 1 ora sy fahefany antoandro.
« Voara-maso ny toe-pahasalaman’ireo olona voan’ny « coronavirus » ireo eny amin’ny hopitaly. Mihinana fanafody izy rehetra. Mizarazara ireto olona ireto: misy no nalefa eny amin’ny hopitaly Befelatanana, hopitaly manarapenitra Andohantapenaka ary eny Anosiala. Tsy mbola nisy ny sitrana satria samy arahi-maso izy ireo amin’izao fotoana izao, ka antony hitazonana azy ireo amin’ny hopitaly », hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Notsindriany fa tsy nisy olona voamarina ho mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » tamin’ireo olona nanaovana fitiliana, omaly maraina hatramin’ny 12 ora antoandro. Mitohy hatrany ny fitiliana atao eny amin’ny « Institut Pasteur de Madagascar », fito andro amin’ny fito andro ary 24 ora amin’ny 24 ora ny asa.
Tsy nanome ny tarehimarika momba ny olona nanaovana fitiliana intsony ry zareo teny amin’ny CCO satria betsaka no manao kajikajy ka mampifangaro an’ireo antontan’isa.
Ankilany, nilaza ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, profesora Ahmad Ahmad fa efa misy ny paika vaovao hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus amin’izao fotoana izao. Mitohy foana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’ antoka. Efa ampiasaina ireo fitaovana fitiliana ahazoambaliny haingana.
Mangataka ny fiarahamientana amin’ny fanatanterahana an’ity paik’ady ity kosa anefa ny minisitera.
Fitoam-pivavahana amin’ny paka :: Miandry ny fanapahan-kevitry ny Filoha ny FFKM
Famerana ny tsena :: Nahazo ny anjarany ireo mpivarotra amoron-dalana